फेरी अर्को अचम्मको अनि उदाहरणिय जोडी पहिलो पटक मिडियामा । ( भिडियो अन्तर्वाता सहित ) – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on फेरी अर्को अचम्मको अनि उदाहरणिय जोडी पहिलो पटक मिडियामा । ( भिडियो अन्तर्वाता सहित )
सागर व्यवसायिक रेस्लरका साथै कलाकार पनि हुन् । उनले २ रुपैँया , मिस्टर भर्जिन , गरुड पुराण , न यता न उता लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् भने बुलेट फ्लोको एउटा म्यूजिक भिडियोमा श्रीमती सितलका साथ मोडलिङ पनि गरेका छन् । सितलले पनि सागरकै बाटो पन्छाउँदै थुप्रै पटक रेस्लिङमा भाग लिईसकेकी छिन् । अहिले भने उनी एक कम्पनीमा जागिरे छिन् । एक अर्काविना छुट्टिएर बस्नै नसक्ने सितल माईत जाँदा पनि सागरलाई सँगै लिएर जान्छिन् । विशेष कारणले केहि समय छुट्टिनु पर्दा एक पटक सितलले आत्महत्याको प्रयास समेत गरेकी थिइन् ।
मेलिना राईको धेरै माया गर्ने मान्छे ३ मिलियन भिउज पार । (भिडीयो सहित )
← सरकारले कर्मचारी र शिक्षकको नयाँ तलबमान सार्वजनिक,नयाँ तलबमान अनुसार कसको तलब कति ? हेर्नुहोस् → गणेश भगवानले सबैको कामना पुरा गरिदिउन् ! बि.स.२०७६ साल साउन २१ गते मंगलबार. आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल !